Yiwu Agent - Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd.
Serivisy Agent Yiwu
Yiwu no tanàna fivarotana varotra ankapobeny manerantany. Manokatra isan'andro ny tsenan'i Yiwu afa-tsy ny CNY, manana ny lazany amin'ny Canton Fair isan'andro izy. Ity ambany ity ny fampidirana amin'ny antsipiriany ny fizotran'ny asa sy ny serivisinay, ary ny tsenan'i Yiwu, manantena izahay fa afaka manana hevitra sasantsasany aorian'ny fijerena topy maso.
Ny fizotranay sy ny serivisinay miasa
Niorina tamin'ny taona 1982, ny tsenan'ny Yiwu Commodity dia iray amin'ireo toby fanondranana entana lehibe indrindra any Shina, izay manana faritra 5,5 tapitrisa metatra toradroa, fivarotana mihoatra ny 75000 karazana varotra 1,8 tapitrisa karazana ary mahasarika mpitsidika 210000 isan'andro. Izy io dia natolotry ny Firenena Mikambana, ny Banky Iraisam-pirenena, Morgan Stanley ary ireo fikambanana manam-pahefana hafa ho "tsena ambongadiny entana lehibe indrindra manerantany".
Ny entam-barotra Yiwu Commodity Market dia nanondrana tany amin'ny firenena sy faritra 219. Isan-taona dia maherin'ny 570000 ny kaontenera mahazatra aondrana. Misy 3.059 ny biraon'ny solontena maharitra an'ny orinasa vahiny, ary ny isan'ny mpandraharaha vahiny monina dia nihoatra ny 13000.
Ny UNHCR (Vaomieran'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoa-ponenana), ny minisiteran'ny raharaham-bahiny ary ireo andrim-panjakana hafa dia nanangana ivon-toerana fampahalalana momba ny famatsiana ao amin'ny tsenan'entana Yiwu.
Nanomboka ny taona 2006, ny Minisiteran'ny Varotra ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia namoaka ny index Yiwu-China Commodities sy ny fenitry ny indostrian'ny "Commodities Classification and Code" nifandimby, izay midika fa ny tsenan'ny Yiwu Commodity dia nahazo zo voafaritra kokoa amin'ny vidiny sy ny fenitra amin'ny entam-barotra manerantany varotra.
International Trade Mart Distrika 1
Niorina tamin'ny volana oktobra 2001, Yiwu International Trade Mart Distrika 1 dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 22 Oktobra 2002, izay mipetraka amin'ny 420 Mu sy velaran-trano 340.000 metatra toradroa miaraka amin'ny fampiasam-bola 700 tapitrisa yuan.
International Trade Mart Distrika 3
mirehareha amin'ny velaran-trano 460.000 m2, trano heva maherin'ny 6000 amin'ny 14 m2 ho an'ny tsirairay amin'ny gorodona 1 ka hatramin'ny 3, trano heva 600-180-100 m2 amin'ny gorodona 4 sy 5 ary ivon-toeram-pivoahana ao amin'ny rihana fahefatra.
Distrikan'ny varotra iraisam-pirenena iraisam-pirenena 5
International Trade Mart District 5 no tetik'asa ifotoran'ny komitin'ny antoko munisipalin'ny Yiwu sy ny governemanta Yiwu hampihatra tsara ny foto-kevitra siantifika momba ny fampandrosoana, ary hampirisika tanteraka ny fananganana an'i Yiwu ho toy ny tanàn-dehibe ara-barotra.
International Trade Mart Distrika 2
Nosokafana tamin'ny 22 Oktobra 2004, ny International Trade Mart District 2 dia mitazona ny velaran'ny tsena 483 Mu sy ny velaran-trano maherin'ny 600000㎡, ary mirehareha ambonin'ny trano heva 8000 ary manangona mpandraharaha maherin'ny 10.000.
International Trade Mart Distrika 4
Nampiasaina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 21 Oktobra 2008 Yiwu International Trade Mart District 4 dia manana velaran-trano 1.080.000 m2 ary mitazona trano heva 16,000. Izy io dia fahenina an'ny tsenan'ny Yiwu amin'ny tantaram-pivoarany.
Tsenan'ny akanjo ao Huangyuan
Ny tsenan'i Yiwu Huangyuan Garments dia ao amin'ny faritra be olona indrindra ao an-tanànan'i Yiwu. Manarona velarana 117 mu sy velarana fananganana 420.000 metatra toradroa.